Maxaa loola jeedaa dhibcaha lombards? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Lombard amaah
Waa maxay deyn Lombard ah?
Marka laga soo tago deymaha caadiga ah ee bangiga, bonds, faallooyinka, dhejinta bangiyada, iibsadaha ama amaahda macaamiisha, waxaa sidoo kale jira deyn Lombard amaah oo ku baaqay.
Qodobkan waxaan dooneynaa inaan u fududeyno sida ugu sahlan ee aan u fahmi karno waxa Lombard deyn ah yahay iyo faa'iidooyinka ama faa'iidooyinka ay leedahay.
Tani waa deyn ay maalgeliso hantida la guuro (mararka qaar loo yaqaan hantida dhabta ah) ama xitaa si fudud oo iibiya (fudud ama sahlan iibka) suuqa.
Hantida aan la guurin waxaa ka mid ah dhulka iyo hantida maguurtada ah, hantida la guuray, tusaale ahaan, saamiyada shirkadda, saamiyada ama wax la mid ah.
Waxaad u maleyneysaa inaad hadda ka fekereyso doorka aad ka ciyaareyso sida deyn Lombard ah.
Deyn ahaan, waxaad noqon laheyd mulkiilaha qiimayaasha (sida dammaanadda), bangigaagu wuxuu noqonayaa dayn-bixiye halkan iyo sidaas oo kale milkiilahaas.
Farqiga ayaa si sahlan u sharxi kara, milkiiluhu wuxuu xaq u leeyahay wax uu leeyahay iyo mulkiiluhu sidan ayuu ku haystaa.
Tusaale yar oo ku saabsan mawduuca:
Marka aad wax ku iibsaneysid waxaad ka heli doontaa t-shirt oo aad jeceshahay oo aad ka iibsato.
Taasi waxay ka dhigeysaa milkiilaha iyo milkiilaha.
Laakiin haddii aad ka soo iibsato T-shirt ka soo saaxiibkaa ama saaxiibkaaga, waxaad weli tahay milkiilaha, laakiin milkiilaha haatan waa saaxiibkaa, sababtoo ah isaga / iyada ayaa dhab ahaan gacanta ku haya gacmahaaga.
Intaas waxaa dheer, deynta lombards caadi ahaan waa sida boqolkiiba yaryar ee qiimaha u adeega sida digaaga.
Iyada oo boqolkiiba, isbeddellada qiimaha ayaa la tixgeliyaa sidaas darteedna tan waa la sii hayaa.
Iyadoo ku xiran hadba sida loo isticmaali karo hantidaada, qiimaha sare ee aad ku amaahan karto.
Waxaa macquul ah in kiiskan macnaheedu yahay, sida ugu dhakhsaha badan ama fudud wax loo iibin karo.
Xayawaan ayaa loo isticmaalaa sababtoo ah isbeddellada sare ee suuqyada, halkii ma aha inta badan hanti.
Qofka gaarka loo leeyahay, amaahda lombards badanaa waa mid fudud oo aan ka yareynin xafiisyo badan marka loo eego qaabab kale oo badan oo deyn ah.
Mabda 'pawnshop' ayaa loo isticmaali karaa halkan si loo fududeeyo.
Waxay keenaan, sheegaan saacad, pawnshop iyo helaan qadar lacag ah.
Si fudud oo aan waxna u dhicin, oo markaa kadib, waxaad dib u soo celin kartaa saacaddan adoo ku soo celinaya ugu yaraan buqzerkan.
Miisaanka hoos ku qoran waa, haddii aadan awoodin inaad dib u bixiso lacagta lagu heshiiyay muddada lagu heshiiyey, shayga qiimaha ama hantida ayaa la xaraashaa.
Noocyada amaahda Lombard
Iyada oo ku xiran nooca rahaadada, amaahdaada Lombard waxay leedahay magac dheeraad ah:
Tusaale ahaan, amaahda amaahatay amaahda amaahda amaahda ayaa loo adeegsadaa miisaan.
Sida magaca loola jeedo, biilka sarrifka waxaa ku jira biilka is-dhaafsiga *.
Saddexaad iyo Sonkorta ayaa ah Ganacsiga, kaas oo loola jeedo Xayeysiinta.
* Biilasha sarrifka: Isbarbardhiga jeeg, marka laga reebo in meel gaar ah iyo taariikhda la isku raacay in lagu wareejiyo lacagta la isku raacay.
Si aad u heshid faham fiican oo mawduucan ah, waxaad ka helaysaa fiidiyowga dhamaadka qodobka, taas oo ku tusi doonta Lombard deyn kale mar labaad la fududeeyey oo la sharraxay Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah, fadlan la soo xiriir kooxdayada adeegga karti leh.
Maqaalka horeLohmann-Ruchti saamayn
Maqaalka xigtadeynta ardayga Master